ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ မွေးလာမယ့် ကလေးအတွက် အပြန်အလှန်တောင်းဆိုမှုတွေ လုပ်လိုက်တဲ့ အိုဇေးလ် – Sports A2Z
အာဆင်နယ်ပရိသတ်တစ်ဦးရဲ့ မွေးလာမယ့် ကလေးအတွက် တွစ်တာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ ကွင်းလယ်လူ မီဆတ် အိုဇေးလ်နဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်သူတို့အနေနဲ့ အပြန်အလှန် တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဒီဂျာမန်ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ရဲ့ တခြားသူတွေအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့ တုံ့ပြန်ပုံအတွက် ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးနေကြပါတယ်။
ဂျက်ခ် ရော်ဘင်ဆန်လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီပရိသတ်ဟာ ဒီမတိုင်ခင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားပြီး ဇူလိုင်လမှာ မွေးဖွားမယ့် ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ သဘောတူညီမှု ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဒါကတော့ သူ့အနေနဲ့ အိုဇေးလ်ကို ခွင့်တောင်းပြီး ကစားသမားဘက်က Reply ပြန်ခဲ့ရင် ကလေးရဲ့နာမည်ကို အိုဇေးလ်လို့ ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရော်ဘင်ဆန်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ တွစ်တာစာမျက်နှာပေါ်မှာ အိုဇေးလ်ရဲ့ @MesutOzil1088 ကို မန်းရှင်းခေါ်ခဲ့ပြီး “ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇူလိုင်လမှာ မွေးမယ့် ကလေးအတွက် အိုဇေးလ်လို့ နာမည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာကို Reply ရမှ သဘောတူမယ်လို့ မိန်းမနဲ့ ပြောထားတာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့လို့ သူက မတ်လ ၅ ရက်နေ့မှာ စတင်ရေးသားခဲ့တာပါ။
It'sadeal mate ✔ I don't let you down. ??? Now it's your turn. I want to see the birth certificate of your kid in July ???? https://t.co/GgEjAmKjTu
သူ့ရဲ့ Tweet နဲ့ မန်းရှင်းကို မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ အိုဇေးလ်က Reply လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး “သဘောတူတယ် သူငယ်ချင်း၊ မင်းကို စိတ်ပျက်အောင် ငါမလုပ်ဘူး။ အခု မင်းအလှည့်ပဲ… ဇူလိုင်လမှာ ကလေးမွေးလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ မွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ကို ငါကြည့်ချင်တယ်”လို့ တုံ့ပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်ခ် ရော်ဘင်ဆန်ရဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်သူ ဟက်သာကတော့ အိုဇေးလ်ရဲ့ Reply အတွက် သူ့အနေနဲ့ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး နာမည်ပေးဖို့ သူ့ယောက်ျားက ကံကောင်းလွန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို ဒီနာမည်ကို ပေးမယ်လို့ အတည်ပြုသွားခဲ့ပြီး သူတို့ကို တခြားအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
REF: TURKISH FOOTBALL & TWITTER
UNICODE: အာဆငျနယျပရိသတျတဈဦးရဲ့ မှေးလာမယျ့ ကလေးအတှကျ တှဈတာလူမှုမီဒီယာပျေါမှာ ကှငျးလယျလူ မီဆတျ အိုဇေးလျနဲ့ ပရိသတျဖွဈသူတို့အနနေဲ့ အပွနျအလှနျ တောငျးဆိုမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွပွီး ဒီဂြာမနျကှငျးလယျဖနျတီးရှငျရဲ့ တခွားသူတှအေပျေါ ဂရုတစိုကျရှိတဲ့ တုံ့ပွနျပုံအတှကျ ပရိသတျတှကေ ခြီးကြူးနကွေပါတယျ။
ဂကျြချ ရျောဘငျဆနျလို့ အမညျရတဲ့ ဒီပရိသတျဟာ ဒီမတိုငျခငျမှာ ကိုယျဝနျဆောငျထားပွီး ဇူလိုငျလမှာ မှေးဖှားမယျ့ ဇနီးဖွဈသူနဲ့ သဘောတူညီမှု ရှိခဲ့ကွတာဖွဈပွီး ဒါကတော့ သူ့အနနေဲ့ အိုဇေးလျကို ခှငျ့တောငျးပွီး ကစားသမားဘကျက Reply ပွနျခဲ့ရငျ ကလေးရဲ့နာမညျကို အိုဇေးလျလို့ ပေးဖို့ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရျောဘငျဆနျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ တှဈတာစာမကျြနှာပျေါမှာ အိုဇေးလျရဲ့ @MesutOzil1088 ကို မနျးရှငျးချေါခဲ့ပွီး “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဇူလိုငျလမှာ မှေးမယျ့ ကလေးအတှကျ အိုဇေးလျလို့ နာမညျပေးဖို့ တောငျးဆိုထားတာကို Reply ရမှ သဘောတူမယျလို့ မိနျးမနဲ့ ပွောထားတာကွောငျ့ ကြှနျတေျာ့ကို စိတျပကျြအောငျ မလုပျပါနဲ့လို့ သူက မတျလ ၅ ရကျနမှေ့ာ စတငျရေးသားခဲ့တာပါ။
သူ့ရဲ့ Tweet နဲ့ မနျးရှငျးကို မတျလ ၉ ရကျနမှေ့ာ အိုဇေးလျက Reply လုပျခဲ့တာဖွဈပွီး “သဘောတူတယျ သူငယျခငျြး၊ မငျးကို စိတျပကျြအောငျ ငါမလုပျဘူး။ အခု မငျးအလှညျ့ပဲ… ဇူလိုငျလမှာ ကလေးမှေးလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ မှေးစာရငျးမှတျပုံတငျကို ငါကွညျ့ခငျြတယျ”လို့ တုံ့ပွနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဂကျြချ ရျောဘငျဆနျရဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈသူ ဟကျသာကတော့ အိုဇေးလျရဲ့ Reply အတှကျ သူ့အနနေဲ့ မယုံနိုငျအောငျဖွဈခဲ့ရပွီး နာမညျပေးဖို့ သူ့ယောကျြားက ကံကောငျးလှနျးခဲ့တယျလို့ ဆိုခဲ့သလို ဒီနာမညျကို ပေးမယျလို့ အတညျပွုသှားခဲ့ပွီး သူတို့ကို တခွားအာဆငျနယျပရိသတျတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှကေ ဝိုငျးဝနျးဂုဏျပွုခဲ့ကွကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။